Concord zvinokonzera matambudziko
Akabatanidzwa Concord zvinokonzera matambudziko
1 gore 6 ago #713 by Casbad
Pane munhu ane dambudziko rekubhururuka here? Icho chandakawana kubva pane ichi chiri kuedza kundiuraya .... (bounces uye kuzununguka uye kuruboshwe runobhururuka panguva yekufamba)
1 gore 6 ago #714 by Dariussssss
Ndezvipi ndege dziri pano dzakaputsika ... hapana chinhu chitsva. Concorde ingave yakanaka, asi inoda zivo yakawanda. Iwe unofanirwa kuendesa huniyo ALL THE TIME. Iyoyo ndiyo nzira chete yekuti ibude yakasimba.
1 gore 6 ago #716 by Gh0stRider203
Hongu ivo vakaputsika nokuti ivo vari Airbus! LOL Ndinopika Ndakaona zvimwe zvinyorwa pamusoro pezvinetso zvine ndege yebhazibha kupfuura ini ndine Boeing
1 gore 6 ago #720 by Casbad
Dude !!!! Unoziva here kuti mafuta ekufambisa anoshanda sei? Ndakaedza kutarisana naro pane zvakawanda zvokutarisa uye kubhururuka mashomanana ... pane pane zvinyorwa zvekuverenga here?
1 gore 5 mazuva apfuura #947 by DRCW
Mhedziso iyi yakasiyana nemhuka dzose pamwe chete, sezvinoratidzwa chero ipi zvayo yepamusoro-soro kumhanya. Pakati pechisimba chinofanira kuverengwa. Urefu hunofanirawo kuonekwa, sezvo ganda rendaneti rinopisa nemhepo huru. Verengai mutengesi uye mutoro kuti uise simba rako. Verenga nzira dziri pamutsara. Dzidza nezve ndege. Pano pane kukanganisa kunzwika kwemazwi pane ndege iyo yakaoma munzeve mumhando yemimhanzi inoshandiswa. Muvaki akaisa iyi faira mufaira yezwi remhepo nekukanganisa. Kuti uzvibvise, svinura firimu rwenzwi uye uende kuburikidza nemasikirwo ezwi kusvikira uwana kuti muteereri wechirwere, ipapo chinyorwa chinyorwa uye chese, zvose zvakanaka.
Time chokusika peji: 0.312 mumasekonzi